Cudurka naqas ku dhega ee Shiinaha ka dilaacay oo la ogaaday halkuu ka yimi - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Cudurka naqas ku dhega ee Shiinaha ka dilaacay oo la ogaaday halkuu ka yimi
Waxa aduunku aad uga qaylinayaa cudur cusub oo ka dilaacay gobol ka mida Shiinaha oo calaamadaha lagu garto ay yihiin naqas ku dheg iyo qofka oo u xanuunsada sida hargab ku dhacay oo kale. Dawlado badan ayaa takoorey dadka Shiinaha ee ka imaanaya gobolkaas waxana loo sameeyay meelo gooni ah oo lagu baaro.
Haddaba cudurkan aabihii ayaa ahaa mid dalkaasi ku dhacay sanadii 2002 oo la sheegay markii dambe in laga qaaday fiidmeer la cuney. Xayawaanada aan aduunku cunin ayaa caan ka ah dalkaasi Shiinaha oo ay aad u cunaan.
Waxa ku jira masaska, dabagaalaha, fiidmeerta iyo nooc kasta oo xayawaana. Magaalada cudurkaan ka bilowdey ayaa gebi ahaanba takooran oo ayna jirin wax galaya iyo wax ka baxaya. Gobolkan ayay ku noolyihiin dad ka badan Somaliya oo dhan.
Cunida Fiidmeerta iyo Masaska
Culimada wax baarta ayaa qaba in cudurkaan ay walaalo yihiin cudurkaas hore ee sambabada ku dhaca ee laga qaaday fiidmeerta la cuney. Cudurkan ayaa sawaabiya cudurka Iboola ee ku dhacay galbeedka Afrika oo isna Afrikaankaasi ka qaadeen fiidmeerta. Waxa Shiinuhu hadda sheegay in ay mamnuuceen cunista xayawaanada oo dhan.
Sanadkii hore ayaa waxa jirey in nin iyo naag xaasley ah oo ku nool dalkaasi Mongooliya ay cuneen dabagaalaha nooca waaweyn ee ku nool inta badan godadka, waxyar kadibna u dhinteen dhiig bax iyo naqas ku dheg weyn.
Sawirka hoose waa maraq fiidmeer dilan dultaalo
Shiinaha badankiisa siiba gobolada u dhow gobolka cudurkani ka dilaacay ayaa sanka iyo afka wada xirtey si ay uga badbaadaan in ay neefsadaan hindhisada iyo qufaca dadka kale.
Wararkii ugu dambeeyay ee cudurkan halista ah ee qofka uu Ku dhaco lagu daaweeyo takoorid ayaa soo gaaray Sucuudiga halkaas oo laga helay kalkaaliso Hindiyad ah oo ka shaqaysa isbitaal lagu magacaabo Alxayaad oo masaafo u jirta caasimadda Riyaad.
Waxa la aaminsan yahay in cudurkan faafayo inta ayna soo bixin calaamadaha xanuunka lagu garto ee sida hargabka ah taas oo halisteeda leh waayo qofka ma oga inuu qabo waase faafinayaa cudurka. Dhimashada aya maraysa 56 qof halka dadka u jiifa lagu sheegay ilaa 2000 oo qof inkastoo Shiinaha lagu eedaynayno inuu qarinayo faafida cudurkan iyo dhimashada saxda ah.
Somaliya iyo hargabkan Shiinaha
Somalidu waxay xiriir toosa oo wax iibsi la leeyihiin Shiinaha lamana garan karo in gobolkan xanuunku ka dilaacay ay ku jirto gobolada ay wax ka soo iibsadaan. Laakiin waa mid Ilaah keliya ka heyn karo cudurkaan, ayadoo dawladihii waaweynaaba la tacaalayaan.